umoya White --ejenti ekhethekile (kuphela), okuhloswe ngalo ukuba alulaze le alkyds ehlukahlukene ewuketshezi, uhlobo oluthile iraba (ikakhulukazi, kungaba butyl futhi cyclohexyl), kanye polybutylmethacrylate. Ngaphezu kwalokho, lapho okuqukethwe kule yokwakheka iphathwa epoxy impahla esters, umoya asebenzayo nonekhono Ukuqedwa ke. Kungani usebenzisa umoya ezimhlophe, indlela esebenza ngayo, lokho athuthelwa yini ejwayelekile? Izimpendulo yonke le mibuzo kanye neminye imikhakha Uzofunda ngokuhamba kokufunda lesi sihloko.
Ngokuvamile, emhlophe umoya uketshezi olusetshenziswa ukuba alulaze le varnishes uwoyela ngokuthola izinto ezibalwe esigabeni esandulele. Leli thuluzi lisetshenziswa ukuvundulula degreasing abese egeza ebusweni imikhiqizo, izingxenye kanye namathuluzi. ubuza -, "Ingabe ezimhlophe Degreases umoya izinga." ngenxa ezinjalo kuphela ngezithako zawo eziphikelelayo futhi ngibe nodlame, esizokucabangela kamuva, uyakwazi chaza ngisho izinto ezinzima, ngakho uma usebenza naye udinga banakekele indlela yokuvikela.
Kodwa emuva isicelo. Ngaphezu degreasing, omunye izici eziyinhloko lolu hlobo kuphela kuyinto dilution gustotertyh futhi ezivamile upende uwoyela-based, koqweqwe lwawo uqweqwe nezinye izinhlobo eziningi futhi izinhlobo upende. Ngaphezu kwalokho, imimoya amaminerali uyakwazi ukuncibilikisa ungqimba kwenziwa ewugqinsi varnishes, izinto bituminous nabanye. Futhi ukuze umphumela umsebenzi owawenziwa walungisiswa abakulindele, ochwepheshe batusa egeza emabhulashini kanye ezinamasondo e uketshezi ngisho ngaphambi kokuzisebenzisa alkyd, uwoyela enamels pentaphthalic. umoya White ngokuvamile sisetshenziswa embonini njengoba isici degreasing esetshenziswa ngaphambi Umdwebo we steel nensimbi izakhiwo.
Kodwa ekuphileni kwansuku zonke-ke asikho ngaphansi esiphuthumayo. Leli pulazi elingu-umoya ezimhlophe isetshenziswa njengophawu kuphela ngoba ibitume ahlukahlukene futhi begcoba. Ngaphezu kwalokho, it is isisetshenziselwa ukulima upende ngaphambi kokuzisebenzisa kwamanzi, kuhlanganise sula yezimoto.
umoya White: izici lobuchwepheshe kanye nokusungulwa
Le into is a naphtha enamandla kuphela, eyakhiwa hydrocarbon ketshezi enamakha aliphatic. Ukukhiqizwa komoya ezimhlophe izuzwe ngqo ziphuzo zazihluzwa kawoyela ongahluziwe, futhi kwezinye izimo, ngisho yokuhlanza amasu ezikhethekile. Ngokusho imininingwane yayo lokhu kuphela kuyinto oluvuthayo kakhulu. Amazinga yaleli thumba-off izindlela ivela 155 kuya 200 degrees Celsius.
Ngo womshini into ezifana imimoya amaminerali bathobele imithetho elandelayo ukukhiqizwa:
Inani labantu okufanele lifinyelelwe hydrocarbon elimnandi ivolumu ketshezi okuholela ngayinye akuyona amaphesenti angaphezu kuka-16.
Reserve ziphuzo zazihluzwa lokushisa kumele singeqi ezingeni degrees 160.
It is nhlobo ukwengeza ketshezi engahluziwe mechanical njengoba amanzi elisekela encibilikayo futhi acid.
Ngikuphi okuhlukileko mayelana umoya ezimhlophe American kusukela Russian?
Naphezu jikelele yokukhiqiza ubuchwepheshe kanye nokusungulwa, ngenxa kumakhemikhali awuketshezi angaphandle Ziningi umehluko kusuka yasekhaya. Kokunikeza uhide lapho ejenti angaphandle "umoya elimhlophe" izici kanye nokusungulwa, uqaphele ezingeni lokuqala ukuhlanzwa eziyingozi ukungcola oluyingozi. Lapha, umehluko oyinhloko itholakala lokuthi ukuthi nozakwabo bakwamanye amazwe, ekukhiqizeni izinto ezimbalwa ezengeziwe ukucutshungulwa izinyathelo, futhi ngenxa yalokho eziyingozi kangako noma ongenandaba nhlobo nephunga anobuthi. Ngakho, uketshezi etholwe ubuchwepheshe US iphephile esengeziwe umuntu uma usebenza degreasing ebusweni. I ongahluziwe umoya white eyingozi kakhulu, ezinesihlungu yingozi empilweni yomuntu. Inkampani Russian ekukhiqizeni kungekho ukusetshenziswa kuphela uhlanzekile ubuchwepheshe kusuka izinto eziyingozi. Ngakho-ke, umkhiqizo basekhaya eziyingozi kakhulu empilweni. Nokho, kubalulekile ukugcizelela inzuzo eyodwa ebalulekile - ezifana imali bystrodeystvennymi kakhudlwana futhi ehlanzekile kangcono kobuso elahlwayo. Lesi sici ibangelwa nje ngokuba yingxenye izinto eziyingozi kakhulu. Ngaphezu kwalokho, umoya yasekhaya yalolu hlobo kakhulu baphakame ngokuya ukuminyana futhi flammability ketshezi angaphandle. Yingakho-ke kungaba yiphutha ukucabanga ukuthi ushayele Russian kuphela eliphansi - naphezu virulence yayo, kuyaphumelela kakhulu yokuhlanza varnishes kanye nezinye izinto.
umoya White: kwengoma. Ukuba khona hydrocarbon
Futhi, omunye umehluko oyinhloko ketshezi olucutshungulwayo lisezingeni elinjani lokuhlushwa hydrocarbon elimnandi. Njengengxenye yalezi kusho nokubekezelela 16 amaphesenti Aromatics esekelwe umthamo isamba umoya. Esikhathini into evela ezinjalo analogue kungukuthi lisetshenziswe ukukhiqizwa.
umoya White, exutshwe ingxenye upende amanzi-based, kwehlisa ukusetshenziswa yayo, kungaphuli izinga enamathela. Nokho, kukhona kudingeka sigxile kulokho akaphelelwa impahla yayo upende ezinjalo kuphela uma isilinganiso kwezithako kuphela ukuze lacquer kuyoba elilungile kakhulu. Kungenjalo engeza umoya upende kuyoba okulingana ukusetshenziswa kwamanzi - umphumela msebenzi Upende omncane. Kuyadingeka ukukhumbula ukuthi umkhiqizi we ketshezi ngamunye kubonisa nemithetho yayo kanye nezidingo uma ukuxuba lo mkhiqizo nomunye.
Kuyini yena ukubheka?
Ngokusekelwe sihloko izithombe, singabona ukuthi lolu hlobo lomoya uketshezi izidakamizwa umbala okusobala. Ngo impahla yayo kufana namafutha viscosity injini (ngisho ngezinye izikhathi ephethe tinge aphuzi). nephunga Isici (okusikhumbuza kaphalafini) wazizwa ngokucacile at ibanga elingamamitha ambalwa. Ipheya umoya ezimhlophe kuyingozi kakhulu ngoba emgudwini wokuphefumula oshisayo womuntu futhi kungabangela ubuthi ezinzima. Ngakho-ke, uma usebenzisa lokhu kuphela Kunconywa ukusebenzisa buso igesi noma ngomshini, izingubo ezikhethekile nge imikhono evikelwe futhi obukhulu amagilavu zenjoloba. By the way, isikhumba Ukungena umoya kungabangela ukusha - umphumela ngakho eqinile kusho.
ketshezi ikhiqizwa eRussia ngaphansi brand olulodwa: "Nefras-S4-155 / 205". Kulokhu, ku ilebula ngamunye ubonisa igama zamagama zesiCyrillic "White Nomoya".
Elondolozwe kuphela esebenzayo ngokuvamile e amabhodlela polyethylene. Inani labo kungenzeka 0.5, 3, 5 no-10 amalitha. Nge yokugcina ezintathu izinhlobo zezitsha zokuphatha ethulwa ngesimo amathini. Ngo ngezinga ezimbonini ukuthuthwa imimoya amaminerali esetshenziswa enkulu 216 litre metal izigubhu. nokugcinwa nezikhathi ngayinye ketshezi ezahlukene - ukusuka eminyakeni emi-3 kuya ku-10.
Kuphela "Nefras-S4-155 / 205" ingenye izinto inflammable kakhulu phakathi kwazo zonke lezo zitholakala kuphela emakethe Russian. Ukuze uqonde ukuthi kwenzeke kanjani ukuba asebenzayo ngokwanele ukuba sicabange ukuthi yonke Ukwahlukaniswa flammability uketshezi iba namakilasi ezithile (kuqala, ephephile, owesine - abasengcupheni kakhulu ukuvuvukala). Ngakho, lolu hlobo umoya kungokwalabo eliphakeme - ibanga lesine. Yingakho izazi is hhayi Kunconywa ukuyisebenzisa eduze izinto ezingase zibambe umlilo, kungcono ukukwenza emashumini ambalwa amamitha kude. Kulokhu, kufanele agcinwe egumbini elimnyama. Ngokuphathelene lokushisa isitoreji, konke kulula kakhulu - umoya akaphelelwa impahla yayo at okushisa kusuka -40 kuya +30 degrees Celsius.
Kungakanani iyona kuphela "umoya esimhlophe"?
Intengo efana kuncike umthamo isitsha lapho kuthululwe. Okungenani izindleko ezishibhile (ruble 35 per unit), uketshezi zazibekwa khona endaweni 0.5-litre polyethylene jar. Ngaphezu kwalokho, amanani enyuka parallel ivolumu komkhiqizo ithengiswe: 1 ilitha izimali kuyodingeka bakhokhe ruble 55, 5 ilitha 10 ilitha kungadla ruble 270 no-530 ngokulandelana kwabo. Metal emgqonyeni nge white umoya ivolumu 216 amalitha kubiza cishe izinkulungwane 8-8,5. Ruble. Kwezinye izimo, zikhona ketshezi 20-litre iziqukathi. Zibiza ruble angaba inkulungwane per unit.
Fence of esakhiweni: izinhlobo kanye nezidingo
Plazmorez CNC iyithuluzi elibalulekile emsebenzini wokukhiqiza
Udizili amakhanda Russia. amakhanda okusha, izithombe kanye Ukucaciswa
Ukubeka "Tornado" - indlalifa edume "Katyusha"
"Moskva" missile impi esheshayo engahlomile kakhulu. Onogada missile impi esheshayo engahlomile kakhulu "Moskva" - Flagship Sea Fleet
I-lemongrass (iberry): indlela yokusebenzisa nezakhiwo eziwusizo
"Mazda Axel": Ukucaciswa kanye nokubuyekeza
Ignition Ilokhi Vaz-2106: ukuhlolwa, ukususwa kanye ukufakwa
RC iloli. I abasha umshayeli
TV aphambili amageyimu
Ukusetshenziswa idemu esitolo yesimanje
The best ski resort eYurophu. Eshibhile ski resort eYurophu
Le filimu "I Witching & Bitching." Ukubuyekeza: elibi, ukulwela amalungelo futhi Gothic